Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Oo Ka Warbixiyay Waxqabadka Taliska – Radio Muqdisho
Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Oo Ka Warbixiyay Waxqabadka Taliska
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Gen Xuseen Xasan Cismaan oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa ka hadlay waxqabadka Ciidanka Asluubta oo uu sheegay in ciidamada ay howshoodu ay aad u socoto islamarkaana ay ku dadaalaan horumrinta taliska iyo xabsiyadii ay lahaayeen oo ay ku howlan yihiin in ay soo celiyaan.
Wareysiga uu siiyay warbaahinta Qaranka Taliyaha Ciidanka Asluubta ayuu kaga hadlay xaaladda maxaabiista ee ku jira xabsiga dhexe oo uu tilmaamay in xaaladoodu ay tahay mid aad u wanaagsan islamarkaana ay ka fakaraan noloshooda iyo caafimaadkooda ay u diyaariyeen howl wadeenno caafimaad oo la tacaalaya maxaabiista xanuunsan, waxaana uu xusay in ay u qabtaan xiliyada qaar cayaar kubadda cagta ah oo ay cayaarayaan maxaabiista si jirka iyo maskaxda ay ugu dhisaan.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Gen Xuseen Xasan Cismaan ayaa ka hadlay maalgashiga dalka ay ku lahaayeen Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ay ku howlanyihiin sidii dib loogu soo celin lahaa kuwaa oo uu sheegay in ay ka mid yihiin in beerihii iyo warshadihii ay lahaayeen.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu digniin u diray dadka dagan xaruumihi ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo uu sheegay in loo baahanyahay in si deg deg ah ay isaga baxaan, isagoo sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin taaga ka mid ah dhulka Asluubta in ay heystaan dad kale.
“Waxaan u taagannahay dhulka Ciidanka Asluubta qofkii rabaa inuu qaato in aan difaacno, ma oggolin in la boobo dhulka ciidanka asluubtu leeyihiin, waana u taagannahay arrintaas” ayuu yiri Generaal Xuseen Xasan Cusmaan.
Baarlamaanka Dalka Kenya Oo Meel Mariyay Safiirka Dowladda Kenya Ay U Soo Magacowday Soomaaliya